Waxaan u fududaynaa Jidka xun.
Xoolihiisuna wax uma taraan markuu halaagsamo.
Annagaa wax hanuuninna.
Aakhariyo Addunbana Annagaa iska leh.
Waxana idiinka digaynaa Naar kulayl daran.
Oosan galaynin Ruux xun mooyeen.
Oo xaqa beeniyay jeedsadayna.
Waxaana ka fogaada (galidda naarta) Ruuxii Eeba ka dhawrsada.
Ee bixiya Xoolihiisa si uu u daahirnoqdo.
Ruux wax ugu nicmeeyayna oo abaalmarinna ma uusanjirin.
Ee Wuxuu u bixin dar Eebaha sareeya.
Wuuna raalli noqondoonaa Ruuxaasi.
Eebe wuxuu ku dhaartay Barqinka.
Iyo Habeenku markuu xasilo (Madoobaado).
Inaan Eebe ka tagin Nabiyow kuuna cadhoonin.
Aakharana kaaga khayr badan Aduunka.
Eebaana ku siindoona (wanaag) waadna raalli noqon.
Miyuusan ku helin Eebahaa Adigoo Agoon ah oosan ku dhawaynin.
Miyuunase ku helin Adigoo baadi ah oosan ku hanuuninin.
Miyuunase ku helin Adigoo caydhi ah oosna ku hodminin (kuu waxyoonin).
Ee Agoonta ha xoogin (hana dhihin).
Ka wax su'aalina ha canaanan.
Nicmada Eebahaana ka sheekee (ku mahadi).
Miyannaan kuu waasicinin Laabta (ku nuurinin).
Oonaan ka dajinin culayskii.